Ogaden News Agency (ONA) – Beesha Caalamka oo Gargaar Daawo Gaadhsiisay Soomaaliya.
Beesha Caalamka oo Gargaar Daawo Gaadhsiisay Soomaaliya.
Posted by ONA Admin	/ October 18, 2017
Shalay ayaa ugu dambeysa sadex maalmood oo Somalia ay ku jartay baroordiiq qaran oo loo sameeynayay dadkii ku dhintay qaraxiii sabtidii ka dhacay Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
Waxaa dhinaca kale la soo gabagabeeyay baadi goobkii lagu baadi goobayay meydadka iyo haddii ay jirto cid ka badbaaday qaraxaasi oo ku hoos jirtay burburka dhismayaasha uu qaraxa dhulka dhigay. Dowladda ayaa shaacisay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay korodhay oo ay gaartay 281 qof, halka dhaawacana uu yahay ilaa 300.
Dhinaca kale, waxaa sii socda gurmadka caalamiga ah ee gaadhaya magaalada Muqdisho, iyadoo ay gaareen dayuurado sida dawo iyo qalab caafimaad, kuwaa oo qaarkood dib u qaaday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxa Muqdisho.
Dowladda Mareykanka ayaa Muqdisho u dirtay diyaarad sida deeq daawo ah. Dowladda Qadar ayaa iyana geysay dayuurad sida deeq dawo ah, taasoo dib u qaaday tiro dhaawac ah. Kenya iyana waxey u dirtay Muqdisho laba diyaaradood iyo oo sida dawo iyo dhakhaatiir, iyadoo 30 ka mid ah dhaawacyadii Muqdisho wax ku noqdayna u qaaday Kenya.